Simferopol-Sevastopol - lokhu ingenye izindawo ethandwa kakhulu eCrimea. izakhamizi Young cwaningo iqhawe-dolobha e-dolobha kule nhlonhlo. Abaningi ufuna ukuthatha uhambo ukuze ebabazekayo Sevastopol ivulekile ngezimpelasonto. Kumelwe uthi, ziningi izindlela zokuthola kusukela komunye umuzi komunye.
Ukuthuthwa kufinyeleleke kakhulu. Izikhangibavakashi ngesitimela bebheke Simferopol-Sevastopol kubiza ruble 35 kuphela. Abahola impesheni - mahhala, abafundi - 50 per cent Isaphulelo. Akumangalisi ukuthi ngeSonto kusihlwa nje kagesi emikhukhwini eminyene. Kusukela Simferopol ukuze edolobheni-hero usuku ukuba izitimela eziyisikhombisa. Bokuqala babo uthunyelwa ngesikhathi 5:35, uhambo kuthatha amahora amabili. At kwehora abantu abayisikhombisa bayobe sebekhona kakade e Sevastopol. Omude kunayo yonke owake isitimela ugibele, isikhathi sokusuka - 10:40. amahora amabili nengxenye kuyodingeka ichithe ama endleleni.
Ngisho ngonyaka odlule, kwakukhona okuthiwa ngesivinini izitimela. Eqinisweni evamile kakhulu lwabagibeli isitimela, nje ukuthi akamanga nhlobo iziteshi (okuyinto bebheke Simferopol-Sevastopol mayelana amabili), kodwa kuphela ezine. Ngakho, ezitobhini zamabhasi bakwazi ukusindisa kuze imizuzu engamashumi amane! Lokhu dovozit abagibeli isitimela nesigamu kuya uya khona. Nokho, manje azisekho uhambe.
Inketho elilungile kakhulu
Abaningi hamba bebheke Simferopol-Sevastopol. Ukuze bafike edolobheni-iqhawe? Lo magazini livela kanye kuphela, khona-ke baqonda ukuthi silula. Ngo Simferopol, kukhona iziteshi ibhasi eziningana, kodwa esiyinhloko ibizwa ngokuthi "Central". Kusuka lapho, amabhasi iya ku zonke izindawo ezidingekayo. Ehhovisi ibhokisi, ungakwazi ukuthenga ithikithi nganoma yisiphi isikhathi. By the way, amabhasi ukuthi ukulandela Sevastopol, okuningi. Lokhu kungenzeka kube nguwe umuntu ebangwa Kerch noma Feodosii ngokusebenzisa Simferopol. Enhloko-dolobha, i-izitobhi zamabhasi, "ucosha" abagibeli lucky ukuba Sevastopol. izindiza Okufanayo waqoqa yikhulu! Yiqiniso, uma eCrimea, ngesikhathi sonyaka isiqongo, kungcono uthenge ithikithi kusengaphambili. Kungcono overpay ngaye ruble ayishumi (intengo ubuncane ruble 90.), Kodwa ke ukuba ncamashi isiqiniseko sokuthi ngeke uhlale ukushisa izikhwama, elinde ngehora lesibili indiza ezengeziwe.
Indlela esheshayo unqobe ibanga Simferopol-Sevastopol, uma ushayela imoto yakho siqu. Ngakho, lapha nenqwaba izinzuzo. Okokuqala, akudingeki ukuba ume imizuzu amabili kude nomuzi. Yiqiniso, akusho ngaso sonke isikhathi kwenzeke, kodwa kwenzeka. Ungakwazi nje ukuya ngqo. Ungakhetha ithrekhi mufushane futhi akudingi e Bakhchysaray, lapho abashayeli abatshalwé abagibeli Shuttle asuke ethenge amathikithi okungena kulo muzi. Kodwa abantu abaningi unombuzo: "? Simferopol-Sevastopol - kanjani lapho ngemoto". Eqinisweni, umgwaqo ilula, ngaphandle convolutions noma ematfuba. 73 Nje amakhilomitha kufanele uye ngqo. Ngokuvamile, noma ngabe kukhona ukungabaza, zikhona izimpawu endleleni, kulandela kukuphi ukuthi ibanga Simferopol-Sevastopol ngeke kusaba khona izinkinga.
73 amakhilomitha - ukuthi singakanani ehlukanisa kathi kwale mizi emibili, uma uya emgceni locondzile. Uma uya okusheshayo emgwaqweni lingenamuntu futhi enqamulelayo, umgwaqo kungathatha cishe ihora! Mangisho, uma une imoto, kufanele uthole lolu hlobo ezokuthutha kuphela. Gasoline ngizoya okungaka - cishe bungamakhilomitha amalitha.
Indlela eya sezindiza
Izivakashi ngeke ukwazi ukuthi Simferopol-Sevastopol-Airport - kuyinto isiqondiso double. Kumele wachaza. Vele lokhu futhi omunye umuzi ine sezindiza. International "Belbek" luseduze Sevastopol futhi "Simferopol", njengoba ungakwazi ukuqagela, kungokwalabo inhlokodolobha YaseCrimea. Ngesikhathi ibhasi esiteshini ithikithi ehhovisi hero, ungathenga ngisho ithikithi "Belbek". Kufanele kube kancane esingaphansi kwesigamu sehora ibhasi. Uma ufuna ukuya Simferopol Airport, uma uthenga ithikithi lakho ibhokisi ehhovisi Sebastopol kudingeka ukucacisa lokhu. Kufanele kuqashelwe ukuthi Simferopol ukufinyelela kube lula. Engingakusho nje stop eduze esiteshini sesitimela ibhesi noma inqola ibhasi eya sezindiza (ngokuvamile isiqondiso ngokubhala eduze kwenani ibhasi). kamuva Imizuzu eyishumi nanhlanu, uyobe kakade kube khona.
Eqolo, kodwa ngaso sonke isikhathi ngokushesha
Kukhona enye indlela yokuthola kusukela Sevastopol ukuba Simferopol, noHezekeli. Lena eqolo futhi akuyona indlela esheshayo njalo. Esiteshini, umshayeli wangasese ukunikela kahle ukufika kuleli dolobha oyifunayo futhi ubiza ukubaluleka kokweqa intengo Ithikithi ibhasi kahlanu, mhlawumbe nangaphezulu. Futhi hhayi yokuthi uzokwazi "fly" ihora. Ngokuvamile kusafanele ulinde emotweni for isigamu sehora kuze umshayeli uzothola omunye abagibeli ababili noma abathathu. Le ndlela disadvantageous bevela kuzo zonke izinhlangothi - kokubili kusuka iphuzu zezimali umbono, futhi ngezilinganiso zesikhathi ukonga. Kulula ukuthi ivikele isigamu efanayo ihora ilindelwe ithikithi ezishibhile. Nokho, kukhona kakade bonke uyazinqumela.
Moscow-Silver Ponds: ikhambo esifundeni Moscow
Yokusetshenziswa amaphilisi ezinhlungu "Sedalgin Plus"
Ikhamera AHD: nokuxhuma ukumisa
Capitol aseRoma: izinto ezithakazelisayo kakhulu mayelana egqumeni esemqoka ye Lomuzi Waphakade